Firaiketan-draharaham-pitsarana : Nidinana ifotony Ankazobe, Maevatanana ary Mahajanga
Published Date: 28 août 2021
Ny firaiketan-draharaham-pitsarana dia sehatra goavana ao anatin’ny asa. Fanatsarana sy fanavaozana no tanjona. Filamatra ny famerenana ny fahatokisan’ny vahoaka sy ny fisokafan’ny Fitsarana aminy. Nanatontosa fidinana ifotony tany Ankazobe, Maevatanana ary Mahajanga ny 23 hatramin’ny 28 Aogositra 2021 ny avy eo anivon’ny Foibem-pitantanana misahana ny firaiketan-draharaham-pitsarana (DGJ).
Ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany, ny Fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana, ny Fitsarana ara-bola, ny Fitsarana Ambony ary ny Tendro iadivana amin’ny Kolikoly (PAC) no nanaovana ny fidinana ifotony. Niompana amin’ny fanavaozana sy fanatsarana ny fandraisana olona sy ny kalitaon’ny asa izany. Andraikitra lehibe ny fanafainganana ny asam-pitsarana. Noho izany indrindra no nifanakalozana tamin’ireo Lehiben’ny Mpiraki-draharaha sy ireo Mpiraki-draharaha mba hisian’ny rindran-damina vaovao sy mahomby eo amin’ny fanatontosana ny asa.
Teboka maromaro no nandrafitra ny lahadinika. Ohatra amin’ireo ny fanentanana amin’ny fanajana ny fitondran-tenan’ny mpiasan’ny Fitsarana, ny fifandraisana eo amin’ny samy mpiara-miasa sy ny fahaizana mandray olona, ny fanatsarana ny kalitaon’ny asa, ny tetikasa fametrahana toeram-pandraisana tokana hanafaingana ny asa, ary ny famahana ireo olana amin’ny fanatanterahana ny asa.
Fiodinana faharoa amin’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny ENAP: Hanomboka ny 27 Septambra izao
Published Date: 26 août 2021
Fanohanana ny asam-pitsarana : Nankatoavin’ny COPIL ny drafitrasa
Published Date: 25 août 2021
Mahatoky ny mpiara-miombon’antok­a sy ireo mpamatsy vola amin’ny ezaka fampandrosoana ny asam-pitsarana. Tontosa androany Alarobia 25 Aogositra 2021 tao amin’ny Tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra ny fankatoavana ny drafitrasa hatramin’ny faran’ity taona 2021 ity teo anivon’ny Komity Mpitantana na « Comité de pilotage » (COPIL).
Ny COPIL izay ahitana ny solontenan’ny avy ao amin’ny Masoivoho Frantsay eto Madagasikara (Ambassade de France à Madagascar), ny avy amin’ny « Agence Française de Développement » na AFD, ny avy amin’ny Tetikasa fanohanana ny Fitsarana eto Madagasikara na « Projet d’Appui à la Justice de Madagascar » (PAJMA) ary ireo Tale Jeneraly isan-tsokajiny eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana izay tarihin’ny Sekretera Jeneraly.
Nizara telo ireo drafitrasa : ny fanohanana ny fandraharahana ny fonja, ny fanohanana ny sehatry ny Fitsarana, ary ny fanohanana ireo Foibem-pitantanana isan-tsokajiny eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Mahavelom-bolo ny ezaka, satria nahazo mihoatra noho ny nantenaina ny fanohanana ireo sehatr’asa.
Fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG : Loza ho an’izay manao kolikoly
Published Date: 24 août 2021
Mazava sy hentitra ny tarigetra. Tsy hisy fandeferana ho an’ireo zatra mpanao lalan-dririnina. Amin’ny ankapobeny, nizotra soa aman-tsara ny andro voalohany amin’ny fifaninanana hidirana mpianatra ho Mpitsara ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana ho Mpitsara sy Mpiraki-draharaha (ENMG). Sahabo ho 3.600 ny isan’ireo mpiadina miatrika ny fifaninanana etsy amin’ny Lycée Moderne Ampefiloha (LMA) sy CEG Antanimbarinandriana. Haharitra 4 andro ny fifaninanana, isaky ny maraina ihany.
Ampiainina antsika etoana ny fizotry ny fifaninanana androany Talata 24 Aogositra 2021.
Fifaninanana hidirana ao amin’ny ENAP : 651 ireo hiatrika ny fiodinana faharoa
Published Date: 23 août 2021
Miisa 500 ireo mpianatra ho raisina ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana Mpandraharahan’ny Fonja (ENAP) ao Antetezambaro, Toamasina. 412 amin’ireo dia lehilahy, ary 88 dia vehivavy ary haharitra 20 volana ny fiofanana. 651 tamin’ireo mpiadina miisa 9.261 manerana ireo foibem-panadinana 14 manerana ny Nosy no hiatrika ny fiodinana faharoa, izay hatao tsy ho ela any Antetezambaro. Hiompana tanteraka amin’ny lafiny ara-panatanjahan-tena ny fifaninanana.
Nivoitra ireo nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety notontosaina androany Alatsinainy 23 Aogositra 2021 teto amin’ny tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra. Nitarika izany ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja (DGAP) Atoa ANDRIAMAROAHINA RANAIVO Tovonjanahary sy ny Talen’ny ENAP Atoa RAZAFINTSALAMA Désiré.
Ankoatra ny fanamafisana fa nadio tanteraka ny fiodinana voalohany, ary ho lavitry ny kolikoly toy izany koa ny fiodinana faharoa ; dia namaly ireo fanontaniana maromaro momba ny raharaha hafa napetraky ny mpanao gazety ireto tompon’andraikitra ireto.
Azo arahinao manontolo tsy misy mipika ao amin’ny pejy « facebook » ireo valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ireo ho fanajana ny mangarahara, sy hahazoan’ny besinimaro valiny amin’ireo fanontaniana mety manitikitika ny tsirairay.